युगसम्बाद साप्ताहिक - सधैं सहमति मात्रै खोज्ने हो ?
Friday, 02.21.2020, 11:36am (GMT+5.5) Home Contact
सधैं सहमति मात्रै खोज्ने हो ?
Tuesday, 11.08.2016, 12:45pm (GMT+5.5)
मुलुकको राजनीतिमा सहमति शब्दको प्रयोग व्यापक छ तर यसको कार्यान्वयन भने शून्य । त्यसैले अब यसको अर्थ विपरीत लाग्न थालेको छ । यही सहमतिको रटान र कथनले गर्दा २०७४ माघ ७ गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने तीन तहको निर्वाचन तामेलीमा पर्ने देखिएको छ । त्यति मात्र हैन निर्वाचन अघि संविधानमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । यसका अतिरिक्त प्रदेशहरूको सिमांकन, स्थानीय तहको निर्धारण गरिसक्नुपर्नेछ । यी काम सकेर स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने छ । तर, यस दिशातिर ठोस प्रयास हुन सकेको छैन । यसको एउटै कारण भनेको सहमतिको रटान हो । मुलुकमा सरकार छ, संसद छ तैपनि सहमति–सहमति भन्दै समय क्षय गर्ने काम मात्रै भैरहेको छ । यदि सहमतिमै सबै काम हुने र गर्ने हो भने संसद किन चाहियो ? संविधान किन चाहियो ? सहमति भए सहमति नभए संवैधानिक विधि र प्रक्रिया अनुसार जानुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
अघिल्लो सरकारले चैत्रभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । अब त्यो सम्भावना टरिसकेको छ । मधेशवादी दलहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनको तयारी भए पनि त्यो संशोधनले अरु वितण्डा मच्चाउने खतरा कायमै छ । अर्कोतिर मधेशवादीकै माग अनुसार संशोधन प्रस्ताव गरिए त्यो पारित नै नहुने अवस्था पनि छ । संविधान आवश्यकताका आधारमा संशोधन हुनुपर्ने प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको तर्क छ । जसले जे भन्यो त्यसैमा संशोधन गर्दै जाने हो भने यसले बेथिति मात्रै निम्त्याउने र हरेक वर्ष संविधान संशोधन गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसले मुलुकको संविधान कस्तो बन्ने हो आफैंमा आश्चर्यजनक अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
मुलुकको राजनीति लोकमानमय छ । तिहार र भारतीय राट्रपतिको नेपाल भ्रमणले ओझेलमा परेको लोकमान प्रकरण अब विस्तारै तात्नेछ । चासोको कुरा के हो भने लोकमान प्रकरण यस्तो बेलामा आएको छ– जतिबेला मुलुक संविधान संशोधन गरी निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुुपर्ने थियो । तर, एकाएक राजनीतिक परिस्थिति अर्कै बाटोतिर दगुर्न थालेको छ । दलहरू कार्कीबिरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमै रुल्मुलिने देखिएको छ । लोकमान प्रकरणमा पनि सहमति खोज्ने भनिंदैछ । यसले राजनीति अन्तै मोडिने देखिएको छ । सरकार र प्रमुख दलहरू गहन र महत्वपूर्ण विषयतिर मोडिन सकेका छैनन् । लोकमान प्रकरण निम्त्याएर देशी–विदेशी शक्तिहरूले नेपाललाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेको आरोप पनि निराधार छैन । लोकमानमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनको बचाउमा विदेशी शक्ति लागेको चर्चा निराधार पक्कै हैन । हिजो जसले लोकमानलाई त्यहाँ पुर्याए उनीहरू नै अहिले लोकमानलाई बचाउन लागिपर्नु आश्चर्यको विषय हैन ।
तर, गम्भीर सवाल के हो भने मुलुक स्थिरतातर्फ जाने संकेत गर्याे कि बाह्य शक्तिले अस्थिरताको एउटा न एउटा अस्त्र प्रहार गर्ने गरेको छ । दलहरूबीच नयाँ विवाद र विषयको प्रवेश गराएर मूल जिम्मेवारीबाट अलग गराउने गरिएको छ । दशैंपछि संविधान संशोधन गरी निर्वाचनको घोषणा गर्ने सरकारको दावी दब्बिएको छ । अर्कोतिर संविधान संशोधनलाई प्रथम प्राथमिकतामा राख्ने भनी नयाँ सरकार बनाउँदा मधेशी मोर्चासंग तीन बुँदे सहमति गरी समर्थन लिएको र वर्तमान संविधानप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेको भारतका सामु पनि सवै पक्षलाई समेट्ने गरी तत्काल संविधान संशोधन गर्ने बचन वर्तमान सरकारले दिएको भए पनि त्यतातिर कदम चाल्नुपूर्व नै महाभियोगको प्रस्तावले सरकार र सवै दललाई रुङग्मुग्याएको छ ।
महाभियोग एउटा प्रसंग हो भने संविधान संशोधन र निर्वाचनको तयारी अर्को । अहिले सबैको ध्यान महाभियोगतिर मात्रै केन्द्रित छ । दलहरूका बैठकमा महाभियोगको पक्षमा उभिने र नउभिने विषयले मात्र प्रवेश पाएको छ । संविधान कार्यान्यनको विषय गौण बन्न पुगेको छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचना र प्रदेशिक संरचनाको टुंगो लगाई संविधानले तोकेको अवधिभित्रै स्थानीय तह, प्रादेशिक र राष्ट्रिय चुनाव गर्ने प्रतिबद्धताका कुरालाई पनि यो प्रकरणले ओझेलमा पारेको छ ।
लोकमान प्रकरणले वर्तमान सत्ता राजनीतिक गठबन्धनलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा असर पार्नसक्ने आशंका गर्न थालिएको छ भने माओवादी केन्द्र र एमालेबीच रहेको दूरी र तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा देखापरेको नाटकीय परिवर्तनको परिणाम के के आउने हो भन्ने उत्कण्ठा पनि चारैतिर जागृत भएको छ । नेपाली कांग्रेसले सत्ता साझेदारलाई पत्तै नदिई महाभियोग दर्ता गरेकाले सत्ता गठबन्धन टुट्नसक्ने धारणा प्रवाह गरिसकेको सन्दर्भले मुलुकमा अर्को अस्थिरताको प्रष्ट चित्र बाहिर आएको छ ।
लोकमान प्रकरणमा पनि तीन प्रमुख दल सहमति खोजिरहेका छन् । संविधान संशोधनमा पनि सहमति नै खोजिएको छ । विगत ८ वर्षयता सहमति शब्दको प्रयोग हजारौंपटक भयो तर राष्ट्रिय हित अनुकूलको सहमति अहिलेसम्म भएको छैन । यदि सहमति खोज्ने नै हो र सहमति गरेरै अघि बढ्ने हो भने सोही अनुसारको चरित्र नेताहरूले प्रदर्शन गर्नुपर्छ– होइन भने कहिल्यै नहुने सहमतिको पछि किन ? सहमतिको विकल्प नभए संविधानको के काम ? जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसदको के काम ? सहमतिको प्रयास आफैंमा उत्तम हो, तर सहमति नभए र नहुने देखिए फेरि सहमति खोज्ने सहमति गर्नुको केही अर्थ छैन । सहमति भए ठीक नभए विधि र प्रक्रिया अनुसार अघि बढेर देश र जनताको हित अनुकूलको निर्णय गर्न सरकार, संसद र दलहरू तयार हुनुपर्छ । सहमति–सहमति मात्रै भन्ने हो भने मुलुक कुन दुर्घटनाको शिकार हुने हो यसै भन्न सकिन्न ।
उसै त बाहिरी शक्तिको चरम चलखेल मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने र संविधान कार्यान्वयनको बाटो छेकेर असफल बनाउने दिशातिर उन्मूम भैरहेका बेलाा जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरू पनि षड्यन्त्रकारीहरूलाई नै मलजल हुने गरी सहमति–सहमति भन्दै संसद र संविधानको वेवास्ता गर्ने हो भने यो मुलुकको भविष्य अन्धकार सिवाय केही हुँदैन । अहिले मधेशवादीलाई रिझाउन सहमति खोज्ने भनिंदैछ । उनीहरूलाई रिझाउँदा अरुलाई बिझ्छ कि बिझ्दैछ ? यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने विषय हो । नेताहरूले के बिर्सनु हुँदैन भने संविधान जारी हुनुपूर्व प्रदेशको संख्यामा भएको सहमतिले देशभर आगो बल्यो । अब त्यस्तो स्थिति निम्त्याउनु भनेको मुलुकलाई बर्बादीको रसातलमा पुर्याउनु हो । त्यसैले अब सहमतिको विकल्प संसद र संविधान हो भन्नेतिर सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।